Pixel 4 wuxuu taageeraa 20W fiilo-bixinno fiilooyin leh iyo 15W lacag-bixin wireless ah | Androidsis
Pixel 4 waxay taageertaa 20-watt fiilooyin si xawli ah ku shaqeeya iyo 15-watt oo lacag la’aan ah
El Pixel 4 Waxaa la soo bandhigay Oktoobar 15 macaamiil badanna horay ayey gacanta ugu hayaan. In kasta oo shirkadda mas'uulka ka ah ilaalinta Android ilaa taariikhda ay si rasmi ah u faafisay dhammaan faahfaahinteeda astaamaha iyo astaamaha farsamo, haddana si buuxda umay muujin, qaarna maalmahan ayay soo if baxeen, sida aan hadda ka hadlayno, taas oo ay tahay inay ku xirto lacagteeda dhakhsaha badan.
Su'aal ahaan, waxaan horeyba u ognahay sida ugu dhakhsaha badan ugudbinta xadhigga iyo tikniyoolajiyadda lacag la'aanta ah ee xaruntan, waana hoos ku diiwaangelineynaa.
Xusuuso taas Pixel 4 waxaa lagu dhawaaqay batari dhan 2,800 mAh. Tiradani waxay umuuqataa mid liidata, marka la barbardhigo 4,000 mAh terminal-ka baytariyada, haa waa, Laakiin Pixel 4 XL waxay xambaarsan tahay lambarkaas 3,700 mAh awoodda, maadaama ay tahay mobiil ballaadhan.
Taageerada Google ayaa ii xaqiijisay xalay inay taageeri doonto ilaa 15w xarig la’aan. Miyay xaddidan 11w ka tahay taleefanka gacanta ama xeedho?
- Christopher Wise (@Coloradowise) October 22, 2019
Sida laga soo xigtay Consortium Powerless, Pixel 4 iyo Pixel 4 XL waxay leeyihiin awoodda ugu badan ee la helay oo ah 11 W. Macluumaadka waxaa ku wadaagay Twitter-ka Mishaal Rahman. Si kastaba ha noqotee, mid ka mid ah faallooyinka ku saabsan tweet ka @Coloradowise Waxa uu sheegay in Google Support ay u xaqiijisay in qalabku uu taageerayo ilaa 15W silig la’aan.
Waxay soo baxday in awoodda ugu badan ee la helo ee ay dejisay Dalladda Awoodda Xarig-la'aanta ay ka sii sarreyso. Tusaale ahaan, usoo qaado awoodda ugu badan ee laga helo Huawei Mate 30 Pro 5G, kaas oo lagu sheegay 5W, laakiin waxaan ognahay in qalabku si dhab ah u taageerayo 27W lacag bixinta degdegga ah ee bilaa wireless.
Waa wax lala yaabo in Google ay ka dhaafto macluumaadkan muhiimka ah dhacdadii daahfurka. Iyagu ma aysan dhawaaqin Pixel Stand cusub sidoo kale midka hada kaliya wuxuu taageeraa 10W. Markaa hadaad haysatid xeedho wireless ah oo taageerta 15W ama kabadan, waad siin kartaa isku day.
Google wuxuu sharxayaa sababta Pixel 4 uusan wax ugu qorin 60k iyo 4 fps
Dhinaca kale, Pixel 4 iyo Pixel 4 XL markab wata xeedho 18W, laakiin dhab ahaantii waxay taageertaa 20W fiilooyin fiilooyin leh sidoo kale. Tani waxay sidoo kale khuseysaa Pixel 3. Waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad heshaa xeedho Awood Bixinta USB oo taageerta 20W ama ka badan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Pixel 4 waxay taageertaa 20-watt fiilooyin si xawli ah ku shaqeeya iyo 15-watt oo lacag la’aan ah
[Fiidiyow] Wax kasta oo aad ku sameyn karto Qalabka Ciyaaraha ee Samsung Galaxy-kaaga
PhotoStack waa barnaamij cusub oo loogu talagay in lagu badalo, dib loo jaleeco oo watermark loogu dhigo sawiradaada